कविताको ब्याज खाएर बाँचिरहेछु  Sourya Online
कविताको ब्याज खाएर बाँचिरहेछु
सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २३ गते २:१० मा प्रकाशित
कवि कृष्णभूषण बल किन बेपत्ता भएको ?
होइन, कविताहरू लेखिरहेको छु । यसबाहेक दैनिक अखबारहरूमा साहित्यिक स्तम्भ पनि लेख्दै छु । लेख्ने काममै छु ।
‘कवि कृष्णभूषण बल’ कविताको ब्याज खाएर बसिरहेको छ भनिन्छ नि ?
हो, त्यो त पक्कै हो । कविताको ब्याज खानेहरूकै कुरा गर्ने हो भने गोपालप्रसाद रिमालले पनि धेरै खानुभयो । भूपी दाइले पनि खानुभयो । अहिले वैरागी काइँला दाइले पनि खाइरहनुभएको छ । एउटा स्थापित नाम भइसकेपछि त्यसलाई ‘मेन्टेन’ गरेर बस्न बहुत गाह्रो कुरा हो । जस्तो पायो त्यस्तै प्रकाशनमा ल्याउनु आफूलाई तल झार्नु हो । गतिलो र राम्रो कुरा त कम नै हुन्छ । योचाहिँ ठीक छ है, भन्ने लागेपछि मात्रै म बाहिर ल्याउँछु । ब्याज खाए भने पनि सावाँ खाए भने पनि कुरा यही हो ।
स्थापित कवि हुनुहुन्छ, कविताको कमाइ कस्तो छ ?
लेखकहरू लेखेर बाँचे भनेको कमै सुनेको छु । केही लेखक छन्, जोचाहिँ लेखेर नै बाँचेका छन् । तर, कविहरूचाहिँ लेखेर बाँच्ने कमै होलान् जस्तो लाग्छ ।
तपाईंचाहिँ कविता लेखेरै बाँच्नु भा’छ कि छैन ?
लेखनमा बाँचे होला । तर, जिउने सन्दर्भमा चाहिँ पहिले जागिर खाएर बाँचे । अहिले पेन्सन खाएर बाँचिरहेको छु ।
नेपालमा कविता लेखेर बाँच्ने दिन कहिले आउला ?
खोइ कहिले भन्नु र † आशा गरौँ चाँडै यस्तो दिन आउनेछ नेपालमा ।
जिन्दगीमा कति लेखिसक्नुभयो, अब बाँकी कति छ ?
खै, त्यति धेरै लेखेजस्तो लाग्दैन । मलाई त भर्खर सुरु गरेजस्तो पनि लाग्दैन । अब एउटा कवितासंग्रह निकाल्ने तयारीमा छु । कवितासंग्रह तयार भइसक्यो तर कहिले के कहिले के भएर रोकिरहेको छ । सायद, चाँडै प्रकाशन हुन्छ होला ?
तपाईं कविता अबेग या, विवेकले लेख्नुहुन्छ ?
म कविता मुटुले लेख्छु ।
‘कवि कृष्णभूषण बल’ र ‘कृष्णभूषण बल’ मा के भिन्नता छ ?
कवि कृष्णभूषण बल सधैँ आफू जन्मेको ठाउँ पाँचथर रविमा पुग्छ । पहाडी बाटोमा खेल्दै, दौडिँदै हिँड्छ । त्यहाँको अविकसित गाउँबस्ती देखेर रुन्छ, कराउँछ । आक्रोश पोख्छ । अहिलेको कृष्णभूषण बल विराटनगरमा बस्छ, कहीँ जानु छ भने रिक्सा चढ्छ, भ्यान चढ्छ । फरक यति छ ।
कवि कृष्णभूषण बलको कमजोर पक्ष के हो ?
एउटा बोतल चार दिन लगाएर मात्रै सक्छु । मेरो कमजोरी त्यही होलाजस्तो लाग्छ ।
उपन्यासको लहर चलिरहेको छ, उपन्यास लेख्ने झोँक चलेको छैन ?
कविता लेखेर नै अघाएको छैन, उपन्यास कसरी लेख्ने र ? उपन्यास र कथाहरू पनि लेख्नै नसक्ने त कहाँ हो र ? तर, त्यो समय कवितामा नै दिउँ भन्ने लाग्छ । उपन्यास वा कथा लेख्ने समयमा त राम्रो कविता पो लेख्न सकिन्छ कि भन्ने लोभ लाग्छ । कविताको मोह घटेकै छैन ।
कुनैबेला कवि कृष्णभूषण बल उपन्यासकार हुने खतरा छ, कि छैन ?
त्यस्तो कुनै खतरा छैन । बरु एउटा मेरो संस्मरणको पुस्तकचाहिँ प्रकाशन हुनेछ ।
तपाईंलाई मनपर्ने कवि र उनको कविता कुन हो ?
अहिलेका पुस्तामा कवि मनु मञ्जिल मलाई मनपर्ने कवि हुन् । उनको ‘दुश्मन’ शीर्षकको कविता मनपर्छ मलाई ।
कुनै एक कविसँग दिनभरि बस्ने अवसर पाउनुभयो भने कोसँग बस्ने चाहना छ ?
वैरागी काइँला दाइ कान सुन्दैनन् र मात्रै । कान मजाले सुने त वैरागी दाइसँग बस्न मन छ । किनभने उनको कविताको उचाइ अहिलेसम्म अरूले लिएकै छैन । काइँला दाइले कान सुनिदिए बूढोसँगै दिनभरि बस्ने थिएँ जस्तो लागिरहन्छ मलाई ।
कविता कुन उद्देश्यले प्रेरित भएर लेख्न सुरु गर्नुभयो अहिले त्यो पूरा भयो कि भएन ?
अहँ, मैले कुनै सपनाबाट प्रेरित भएर लखेको होइन । कविता लेख्न सुरु गर्दा कवि हुन्छु भन्ने पनि लागेको थिएन । कवि कस्तो हुन्छ ? भन्ने पनि थाहा थिएन । कवि हुँला भनेर सोचेको पनि होइन । साहित्यकार हुन्छु, भनेर सम्झेको पनि थिइनँ । लेख्दा–लेख्दै अब कवि पो भइएछ ।
कविता कसका लागि लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो, अहिले कसका लागि लेख्दै हुनुहुन्छ ?
म सानै छँदा मेरी आमा खस्नुभयो, त्यो दु:खद् घटनाले मलाई भावुक बनायो । म जन्मेको ठाउँ रवि ज्यादै रसिलो र रमाइलो थियो । त्यसै पनि कविता फुर्ने ठाउँ थियो त्यो । भावुकतावश त्यही लेखेका कुराहरू अहिले कविता भएछन् जस्तो लाग्छ मलाई ।
पहिल्यै कवितामा घोषणा गर्नुभएको थियो, ‘काठमाडौं, काठमाडौं एक्लैले बोक्न सक्दैन’ तपाईंको पूर्वघोषणा अहिले सही भयो, मक्ख हुनुहुन्छ होला नि ?
खासगरी मैले त्यो कविता विकेन्द्रीकरणका लागि लेखेको थिएँ । विकेन्द्रीकरण ठीक हो भन्ने मेरो विचार थियो । अहिले त संघीयताका नाममा तपाईं हामी नै छुट्टिनुपर्ने अवस्था भयो । तपाईं बेग्लै संघको, म बेग्लै संघको हुनुपर्ने भयो । अहिले कतै न कतै टाढा–टाढा हुँदै गरेको महसुस भइरहेको छ मलाई । म त एकै ठाउँ, एकै पँधेरो, एउटै चौतारो मनपर्ने मान्छे । अहिले जे भइरहेको छ, मलाई चाहिँ कता–कता चित्त बुझेको छैन ।
हिजो एक्लैले काठमाडौं बोक्नै सक्दैन भन्नुभयो, आज काठमाडांै बाँडिँदै छ, अब हुने संघहरूले चाहिँ आफ्नो भारी आफैँ बोक्न सक्लान् त ?
मधेस जसरी दुई टुक्रा मात्रै पारिएको छ । अब पहाडले भारी त के झोला पनि बोक्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई ।
काठमाडौंबाहिर बस्ने साहित्यकारको दु:ख के हो ?
यस्तो दु:ख मैलेचाहिँ महसुस गरेको छैन । प्रतिभा छ भने जहाँ बसे पनि उस्तै हो । प्रतिभा छैन भने राजधानीमा बसेर पनि केही हुँदैन । मैले त काठमाडौंबाहिर बसेको केही फरक महसुस गरेकै छैन ।
काठमाडौंबाहिर बस्नुको आनन्दचाहिँ नि ?
राजधानीमा जस्तो गुट–उपगुट छैन यहाँका साहित्यकारमा । सबै कुरामा सधैँ मन मिल्छ । कुनै पनि काम गर्दा एकजुट भएर पूरा गर्छौं । यहाँ भिडभाड, थिचोमिचो, अटेसमटेस हुने खालको वातवरण छैन । एकदमै रमाइलो वातावरण हुन्छ, त्यो नै रमाइलो पक्ष हो ।
तपाईंलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन, ‘राजधानीमा बसेको भए कवि कृष्णभूषण बलको उचाइ अझ माथि हुने थियो †’
म महत्त्वाकांक्षी मान्छे होइन । त्यसरी कहिल्यै सोच्दिनँ म । काठमाडांै बसेको भए यो हुन्थ्या,े त्यो हुन्थ्यो भन्ने पटक्कै लाग्दैन मलाई । मलाई ठूलो मान्छे हुने रहर कहिल्यै भएन । हरिभक्त कटुवालको गीत ‘म जे छु, ठीकै छु मलाई बिथोल्न नआऊ’ भनेजस्तो पो भएको छ । मलाई यो नै ठीक छ । छैन कुनै गुनासो ।
विराटनगरको ‘वाणी प्रकाशन’को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईंको प्रकाशनले नेपाली साहित्यलाई
दिइरहेको छ ?
मोरङको विराटनगर भन्ने ठाउँ कवि, साहित्यकारहरूको होइन तर पनि कवि साहित्यकारहरूकै ठाउँ हो जस्तो गरेर हामी नियमित कवि गोष्ठीहरू गरिरहेका छौँ । साहित्यमा चहलपहल ल्याउँछ सफल भएको छ वाणी प्रकाशन । वाणी प्रकाशन विराटनगरको एउटा गहना हो ।
नलेखिएको तर लेख्नै पर्ने विषय केही छ ?
यस्ता विषय धेरै छन् । म जहिल्यै पनि सोच्छु राष्ट्रलाई बोक्ने, आफ्नो संस्कारलाई कहिल्यै नभुल्ने, अत्यन्त मिहिनेती तर असाध्यै दु:ख गर्न सक्ने थारू थरुनीहरू जो विदेशको नाममा फारवेसजगन्जसम्म पनि पुगेको छैन होला । तिनीहरूका बारेमा लेखिएकै छैन । उनीहरूको बारेमा खोजअनुसन्धान गरेर लेख्न हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्छ । यी यस्ता धेरै कथाव्यथा लेखिन बाँकी छन् ।
काठमाडौंलाई विराटनगरका कृष्णभूषण बलको सन्देश के छ ?
जो जहाँ बसे पनि आफ्नो देश र भूगोल नबिर्सौं । सबैले आफ्नो धर्तीको समृद्धिको पक्षमा काम गरौँ । सबै लेखकले मुलुकको समृद्धि लेखून् । जो जति छौँ, हामी सबै नेपाली हौँ । नेपाल छ र न हामी नेपाली छौँ । मेरो सन्देश भने पनि मनको कुरा भने पनि यही हो ।
तपाईंलाई असाध्यै मनपर्ने आफ्नै कविता कुन हुन् ?
पहिलेको ‘नदी किनारको पूर्णिमा’ शीर्षकको कविता मलाई असाध्यै मनपर्छ । हुन त बाल्ने निभाउने स्विच यिनै हुने भनेर पञ्चहरूलाई प्वाक्कै हानेको छु । अहिलेसम्म पनि म त्यो कविता मन पराएर पढ्छु । त्यो ०३५/३६ तिर लेखेको हो । त्यसपछि आएर झनै त्यस्ता खालका कविता लेख्दै आएको छु । तत्काल प्रभाव पार्नेभन्दा पनि सधैँ बाँच्ने कविता लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
लेखेर के पाइँदो रहेछ, तपाईंको निकष्र्ष के हो ?
खोइ के पाइयो भन्नु ? अहिले प्राज्ञ सभासद् भएको छु । सबैले प्राज्ञज्यू भन्छन् । अनि खर्चचाहिँ बढेको छ । अन्य त केही पनि छैन ।
प्रस्तुति : राजेश राई
पेस्तोल र गोलीसहित एक पक्राउ
भ्रष्टाचार बढेको होइन, अख्तियार सक्रिय भएकोः मन्त्री बास्कोटा
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सह्य हुँदैनः मन्त्री अर्याल
गङ्गटो हैन कमिलोजस्तै बनौँः मन्त्री पण्डित
सप्तरीमा जीप दुर्घटना, एक पत्रकारको मृत्यु, चार घाइते
रविको अमेरिकास्थित घरमा लिलामीको सूचना
संस्थाको हितलाई सहयोग गर्नुस : मन्त्री अर्याल
रियालिटी शो ‘हिरो नेपाल’ हुने
पुल भाँचिएपछि बुटवल नारायणगढ सडक अवरुद्ध
पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा अस्मिता कार्की पक्राउ
पाँचथरमा उपनिर्वाचन तात्न थाल्यो
तनहुँको बन्दीपुरमा घाँटी रेटेर हत्या
श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा छुट्टाउने महिलाको मृत्यु